Gcwalisa iRosari eNgcwele Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Elinye lamaxesha abucala kakhulu kumaKristu kukuthandaza Irosari engcwele igqibe, kuba ngamnye wabathathi-nxaxheba ufumana iimvakalelo zoxolo kwaye ngokuyinxenye, ubuThixo balo.
Thandaza kunye neyakho iNgcwele irosari epheleleyo
1 Fumanisa iRosari eNgcwele epheleleyo kunye nokubaluleka kwayo kusapho
1.1 Yintoni iRosari eNgcwele?
1.2 Yintoni eyenza irosari?
1.2.2 Isivumo Sokholo Sabapostile
1.2.3 Amaso eerosari
Fumanisa iRosari eNgcwele epheleleyo kunye nokubaluleka kwayo kusapho
Elinye lawona maxesha asempilweni kusapho kwaye abonisa ubudlelwane obukhulu phakathi kwabo bonke, kukwazi thandaza irosari engcwele gqibezela phakathi kwabo bonke, ukubanakho ukudibanisa konke kwaye ube nakho ukukhulisa uthando losapho kunye nokomoya, into eyimfuneko kwaye ekhethekileyo kula maxesha apho umanyano lubalulekile. Into ebalulekileyo kukwazi oko irosari Ayisiyokuthetha kuphela izinto ezivakaliswa yile ncwadi, kodwa ikwava namagama athi le nto iyathetha, kuba ibalisa ibali likaYesu Krestu kunye nemithandazo ebaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukunxibelelana naye.
Ukubaluleka kweRosari kukukwazi ukunxibelelana noThixo, ngokholo, olufuna ukuba ngokuthandaza, abantu baluve uthando lukaThixo noYesu, bethandaza kwaye beziva nganye enxulumene. Uluvo lwale ncwadi kukwazi ukuqonda inxenye yezinto malunga nembali yonyana kaThixo, ohambe amaxesha aliqela obuqaqawuli obuqaqambileyo, nangona kunjalo, amaxesha okugqibela afanayo nawo ayabaliswa, onke ngamehlo Unina, iNtombikazi enguMariya, ongumlinganiswa ophambili kweli bali liphela.
Intombikazi enguMariya inceda olu nxibelelwano noThixo ukuba luphunyezwe ngomthandazo ngamnye owenzelwa iNkosi kunye namagama athethwe yiyo ngeli xesha. Intombi enyulu ngumfazi ozele luthando nobabalo, ofuna ukuba akwazi ukunxibelelana ngokwasemoyeni noThixo noYesu, enguMariya umlamli wale ndlela, ezibonisa njengomama okhuselayo ngalo lonke ixesha.
Yintoni iRosari eNgcwele?
IRosari eNgcwele sisikhokelo esipheleleyo sokukwazi ukuthandaza nokudumisa umdali kunye nonyana wakhe, ukongeza, ikuvumela ukuba unxibelelane ngakumbi noYesu, ngokusebenzisa iimfihlakalo zakhe ezingama-20. Imfihlelo nganye yindlela yokwazi amaxesha okubaluleka okanye ukuqaqambisa kubomi bonyana kaThixo, ngunina uMariya, othe ngandlela ithile ngumbalisi wazo zonke iziganeko.
Emva kokugqiba imfihlelo nganye, uBawo wethu uBawo kufuneka acengcelezwe ngothando olukhulu, ekhatshwa ngu-Meyi uMthetheleli uMariya, ezizezona zikhokelo ziphambili xa uthandaza. Emva kokugqiba ngoBawo Wethu kunye noThixo osindisayo, uGloria uyathandazelwa, ukuze kuphakanyiswe ubukhulu bukatata nonyana.
Irosari yaphuhliswa ngo-810 AD, iyincwadi kunye nesikhokelo esenziwe kwi-Ekaristi ukuze abathembekileyo beNkosi bakwazi ngokusondeleyo iNkosi uYesu, uKristu. Umbono yayikukufundisa malunga neemeko ezibalulekileyo kubomi bonyana kaMariya, ngabantwana bakhe, esebenza njengembonakalo yokudala uvelwano ebantwini malunga nebali njengomntwana, ukutshintshwa kwakhe kunye nokuthanda kwakhe.
Uluvo lwale ncwadi inkulu kukonyusa ukholo kunye nethemba lamaKristu, ukudala unxibelelwano phakathi kwabo neNkosi, kubonisa ukuba njengathi, wayengumntu kwaye eyiqonda nganye yeemvakalelo esizivayo; uloyiko, uthando kunye noloyiko. Akunyanzelekanga ukuba ube kunye ukuze uthandaze, kwanele ukuba nomnqweno kunye nokholo, olusebenza ukunxibelelana namagama kunye namandla kaYesu, yena eyinkxaso yakho ngelixa ufunda amagama anamandla erosari.
Yintoni eyenza irosari?
IRosari, ekubeni iyincwadi ebaluleke kakhulu kubuKrestu, inemithandazo eyahlukeneyo kunye namabali asebenza njengezihlanganisi kwibali likaYesu. Inesakhiwo esibalulekileyo, ngesiqhelo, inika inyathelo ngenyathelo ekufuneka yenziwe ukuphuhlisa ibali kunye nokunxibelelana neNkosi.
Iphepha elibanzi elichaza indlela umnqamlezo owenziwa ngayo egameni likaThixo, eli linyathelo lokuqala ekuphuhliseni irosari. Iqala ngebunzi, isithi "egameni likayise", emva koko isitsho phantsi isithi "Yonyana", iyaqhubeka ngasekhohlo nasekunene "UMoya oyiNgcwele" kwaye iphele ngo "Amen".
Isivumo Sokholo Sabapostile
Emva kokuba kwenziwe umnqamlezo, cengceleza umthandazo wokholo kubapostile, ekubeni ungumthandazo obaluleke kakhulu kunqulo. Sisenzo senkululeko kunye nonxibelelwano, kuba ibali likaYesu libaliswa ngendlela eshwankathelweyo, exela bonke ubungangamsha bakhe namandla kwigama ngalinye.
Owona mzuzu ubaluleke kakhulu kwirosari ngamaso ayo, anokukubhida. Iirosari ubuhlalu licandelo ngalinye okanye umthandazo owenziwa ngemfihlakalo, umbono kukugcwalisa ii-nuggets ezilithoba ezibonisa ukuba iphumelele.
Imbewu yokuqala imele uBawo wethu ofezekileyo, nto leyo inye kuphela kwimfihlakalo nganye. Ke, 9 Isichotho uMariya wenziwa ekhonza njengesixhasi kunye nomanyano phakathi koThixo, uYesu kunye neNtombi Enyulu.
Imbewu yokugqibela okanye yeshumi igqityiwe ngeGloria, ukuze uphakamise ngokufanelekileyo kwaye uvale umthandazo. Le yinkqubo eqhutywa ngokujikeleza, kude kube kugqityiwe iimfihlakalo ezi-5.
Iimfihlakalo yimithandazo ekufuneka siziva kwaye siyiphinda ngononophelo, ziimeko awazifumanayo uYesu, ekufuneka siziphindaphinde ngothando nokuqonda. Umbono kukuthandaza imfihlelo echukumisa loo veki, kuba veki nganye kukho imfihlakalo yokuba uYesu wadlula ngantoni ngelo xesha.
Umbono kukucamngca ngomthandazo ngamnye ophindaphindiweyo okanye iimfihlakalo, uziva ngalo lonke ukholo olunokwenzeka uthando lukaYesu. Kuya kufuneka ufunde ezintlanu zolo suku kwaye wenze iiakhawunti eziyimfuneko. Ukuba ulithandile eli nqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: "Umthandazo kugqirha womntwana". Ndiyazi ukuba uya kuyithanda.